Warar sheegaya wariye gacan saar la yeeshay kooxda SSC | FooreNews
Home wararka Warar sheegaya wariye gacan saar la yeeshay kooxda SSC
Warar sheegaya wariye gacan saar la yeeshay kooxda SSC
FoorenewsSep 19, 2011wararka0
Waxan waa wax jira warka kusaabsan Weriyaha dawladda ee gobolka Sanaag Mr-Sarraaf inuu gacansaar iyo wada shaqayn dhow la leeyahay kooxda SSC. Waxana caddayn innooku filan Shebekedda Hadhwanaag News iyo Shebekedaha kale ee wararku ma qoraan ama ma sheegaan wax aan jirin.
Intaas kaddib waxan beeninayaa warka ay shebekedaha qaarkood baahiyeen ee sheegaya in Ururka Suxufiyiinta Sanaag (Sanag Media Group) ee aniga iyo rag kaleba madaxdiisa ka mid nahay Shir jaraaid ku canbaareeyeen shebekedda Hadhwanaag oo sida la sheegay warkaas hore loo shaaciyey. Taasoo aan leeyahay ma jiro shirkaas jaraaid oo Ururka Suxufiyiinta Sanaag wadajir ku qabteen. Iyo canbaarayn aannu usoo jeedinayno shebekedda hadhwanaag toonna. Haddii shakhsiyaad ururkaas ka mid ahi sharkaas qabteenna waa mid iyaga ku kooban.
Waxana quruxbadan ama wanaagsan in cidda magac sheeganaysaa haysato kalsoonida magaca ay sheeganayso mana aha Ururka Suxufiyiinta Sanaag wax cid ama shakhsiyaad gaar ahi danaheeda ugu adeegato ama xaqiiqo jirta beeninteeda loo adeegsado ama cid lagaga been abuurto toonna.
Waxan Shebekedda Hadhwanaag ka raalli gelinayaa canbaaraynta lagu sheegay in Ururka Suxufiyiinta Sanaag ugasoo jeediyey war ay shebekeddaasi shaacisayoo sheegaya in weriyaha qaranka ee gobolka Sanaag Maxamuud Sarraaf gacansaar iyo wada shaqayn la leeyahay kooxda SSC. Waxan kaloo kula talinayaa cidda warkaas dhibsatay ama danteeda ka arki weydaa inaanay adeegsan ama ka been abuuran magac urur ama shakhsiyaad toonna. Madaxada iyo shakhsiyaadka kale ee shirkaas jaraaid lagaga been abuurtayna waxan usoo jeedinayaa inay warbaahinta ka caddeeyaan inaanay arrintaas lug ku lahayn, kana raalli geliyaan cid kastoo lagu canbaaraynayo shirkaas jaraaid ee shakhsiyaadka ku kooban
Previous Postkuuriyada Koonfureed Next PostMadaxwaynaha dalka Kenya Mr.kibaki oo uu kicitimay maraykan